Isifunda simemezela ushintsho ekusatshalalisweni komuthi wokugoma - princetoncovid.org
AbakwaMercer County Division of Health bamemezele ngasekuqaleni kwaleli sonto ukuthi benze izinguquko ezithile ekusatshalalisweni kwemigomo ngokuyalelwa ngumyalelo woMnyango Wezempilo waseNJ. Ngiyacela Chofoza lapha Ukuvuselelwa Komuthi Wokugoma ngoFebhuwari 10.
** Sicela wazi: Uma unomthamo wesibili ohlelelwe uMnyango Wezempilo ePrinceton, uzothola lowo dosi ngosuku oluhleliwe. **
Ukubhalisela Ukugoma - Joyina uhlu lokulinda ngokusebenzisa Uhlelo Lokuhlela Ukugonywa KweNew Jersey. Ukugcwalisa ifomu lokubhalisa ngaphambilini kuthatha imizuzu eyi-15. Uzobuzwa imibuzo ethile ukunquma ukuthi ukufanele nini ukuthola umgomo. Uma unenkinga yezobuchwepheshe ngokubhalisa, shayela Inombolo Yocingo Lokusiza ye-COVID ku- (855) 568-0545 noma uqedele lokhu Ifomu Losizo.
Uhlu Lokulinda Olukhona - Uma usohlwini lokulinda lwasePrinceton, uzothintwa yiMercer County Division of Health kanye / noma noMnyango Wezempilo wasePrinceton lapho usukhethelwe ukuqokwa. Uma usohlwini lokulinda futhi uthola umgomo wakho kwenye indawo, sicela imeyili uMnyango Wezempilo kamasipala uzosuswa ohlwini lokulinda. Uyacelwa ukuthi ungathinti umnyango mayelana nokuqokwa noma isimo sohlu lokulinda.